မောင်စေတနာ: Zawgyi Font For Window764 bit
Zawgyi Font For Window764 bit
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်ထံသို့ window764 bit တွင် Gtalk မှာ ဇော်ဂျီ တင်မရ၊ သုံးမရသည့်ပြဿနာများကို မိတ်ဆွေ တော်တော်များများက မေးမြန်းလာကြ၏။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ အကြံဥာဏ်ပေး သော်လည်းကောင်းဖြင့် ဖြေရှင်းလျက်ရှိလေ၏။
ဆိုဒ်တော်တော်များများတွင် ရေးသားနေ သည့်အတွက် ကျွန်ုပ်၏ ဘလော့တွင် ဖော်ပြခြင်း မရှိကြောင်း ရှင်းပြရလေ၏။
သို့သော် အားလုံး၏ အဆင်မပြေမှုကို အကြောင်းပြု၍ Window764 bit တွင် ဇော်ဂျီပြဿနာအား အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်စေရန် ဖော်ပြပါ၏။
စက်ထဲတွင် ဇော်ဂျီရှိ၍ သော်လည်းကောင်း (သို့) Install လုပ်ထားသော်လည်းကောင်း ယခု ဆော့ဝဲကို Run ၍ Install လုပ်ပြီး ဖျက်ပါ။
ယခုပေးသော လင့်မှ ZawgyiL_amd64.msi ကို Install လုပ်ပါ။
Gtalk ၀င်ပြီး Setting တွင် ညာဘက်ရှိ Chane Font တွင် Zawgyi One ကို ရွေးပါ။
15 ယောက် မှတ်ချက်ပြုသည်:
ကိုစေတနာရေ ကျနော့်စက်ထဲမှာက gtalk တို့ web တို့မှာမြန်မာစာကိုဖတ်လို့ရပါတယ်...မရတာက ကွန်ပျူတာထဲမှာ မြန်မာလို့ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ Floder အမည်တွေသီချင်းအမည်တွေကိုတော့ဖတ်လို့မရပါပါဘူးလေးေါးင့်တုံးလေးများသာ ပေါ်နေပါတယ် မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။ သိရင်ဖြေပေးပါအကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Desktop အလွတ်တနေရာမှာ Right click ထောက်ပီး Personalize ကိုဝင်ပီး window color ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Advanced apperance settings ဆိုတာလေးကိုတွေ့လိမ့်မရ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Item ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ Icon ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါ Font နေရာမှာ Zawgyi-One ပြောင်းပေးလိုက်ပီး Ok and Save changes ဆို အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မရ်
keybook ma ya lo lote par o ako !
ba lo install lote ya lal par shin pya par
3:43 AM, April 07, 2013
zawgyi keybook ko lote ma ya loasaasone lay shin pya par o ! thanksako !
window server 2008 မှာ AD server ထောင်နည်းကို share ပေးပါအုံးဗျာ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျနော်ပြောပြမယ် miniman9999@gmail.com ကိုအပ်လိုက်။ မအပ်ချင်ရင် Mail ပို့ လိုက် ။ Post Reply နဲ့ ရှင်းပြပေးမယ် ။ ခုတော့ အိပ်ပြီ ။
11:57 PM, October 17, 2013
winhtunmyat90@gmail.com ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်ပေမယ့် သူ့အကောင့်က ဖျက်သွားပြီး။
ကိုယ်အဆင်ပြေသလို သူလည်း အဆင်ပြေပါစေ။
ကိုစေတနာလည်း ထိုနည်းတူစွာ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
10:30 PM, February 13, 2014
Why i cannot read Myanmar font?
I already installed Zawgyi One/Unicode L
My typing is always (square)
6:35 AM, February 17, 2014
winhtunmyat90@gmail.com ပြောထားသလို လုပ်လိုက်ပါ ကို Naing Lin အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
11:55 AM, September 25, 2014
aye myint said...
၀င်းဒိုး7 64 bit မှာအင်​တာနက်​အိတ်​စပလိုးရား ကမြန်​မာစာမှန်​ပြီး ဖိုင်းယား​ဖောက်​နဲ့ခရုမ်းက ယပင့်​ နဲ့ အသတ်​​တွေ ​ရှေ့​ရောက်​​နေတာ ဘယ်​လိုပြင်​လို့ရနိုင်​မလဲလို ကူညီ​ပေးပါလားအကို
3:12 PM, September 12, 2015
3:16 PM, September 12, 2015
9:05 PM, November 10, 2015
Thank You par khamyar
2:08 PM, March 18, 2016
kaungthant tun said...
zawgyi-one keyစာရွက်လေး လိုချင်ပါတယ် ကူညီပေးကျပါလား
1:09 PM, May 31, 2017